ब्वाइज युनियन फाल्गुनन्द गोल्डकपबाट बाहिरियो | Hamro Khelkud
ब्वाइज युनियन फाल्गुनन्द गोल्डकपबाट बाहिरियो
पाँचथर – पाँचथरको फिदिममा आज सुरु भएको नवौं फाल्गुनन्द गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा सुनसरी ११ विजयी भएको छ । फिदिम मा. वि. को खेल मैदानमा भएको खेलमा सुनसरीले ब्वाइज युनियन काठमाण्डौंलाई ३–० गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो ।
जितसँगै सुनसरीले क्वाटर फाइनलमा एपिएफ काठमाण्डौं सँगको भेट पक्का गरेको छ । खेल सुरु भएको ३ मिनेटमै सुनसरीका तीर्थ बस्नेतले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ब्वाइज युनियनका गोलकिपरले बललाइ पुर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन नसके पछि रिबाउन्डमा आएको बललाई तीर्थले पोस्टतर्फ दिशा दिएका थिए ।
खेलको ३६ औं मिनेटमा गोलकिपर अघि बढेको अवस्थामा डिफेन्डरलाई छलाउँदै सुन्दर गोल गरेका तीर्थले सुनसरीको अग्रता दोब्बर पारे । खेलको ६० औं मिनेटमा सुनसरीका सौजन याख्खाले वान भर्सेज वानको स्थितिमा गोल गर्दै टोलीको जित पक्का गरेका थिए ।
अधिकांश समय खेल नियन्त्रणमा राखे पनि गोल गर्न नसक्दा ब्वाइज युनियन घर फर्किन बाध्य बन्यो । पहिलो हाफमा पाएको धेरै अवसरहरुमा गोल गर्न नसक्दा नै ब्याइज युनियनले खेल गुमाएको हो । ब्वाइज युनियनको टोलीमा ३ जना विदेशी खेलाडी तथा ३ जना यु १९ का राष्ट्रिय खेलाडी रहेका थियो ।
खेलको सुरुमा नै गोल गर्न सक्दा टिमलाई जित्न सहज भएको सुनसरीका प्रशिक्षक श्याम मानन्धरले बताए । यता खेलाडीहरुको तालमेल नमिल्दा र खेलाडीको लागि खेल मैदान नयाँ हुदा खेल गुमाउनु परेको ब्वाइज युनियन काठमाण्डौंका प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठले बताए । खेलमा २ गोल गरेका र्तीर्थ ‘म्यान अफ दि म्याच’ हुँदै नगद १० हजार प्राप्त गरे ।
८ दिन सम्म सञ्चालन हुने फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद ३ लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले नगद २ लाख प्राप्त गर्ने छन् । हरेक दिनको म्यान अफ दि म्याच तथा प्रतियोगिताको उत्कृष्ट रक्षक, प्रशिक्षक, मिडफिल्डर र फरवार्डले समान नगद १० हजार प्राप्त गर्ने छन् । प्रतियोगिताको सर्वाेकृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल प्राप्त गर्ने छ ।
फाल्गुनन्द गोल्डकपमा शनिबार हुने खेल:
बिर्ता युनाइटेड विरुद्ध मिसन युनाइटेड ताप्लेजुङ – २ बजे